मंसिर १५ गते बुधबार : आज कुन राशि भएकाहरुको भाग्य कस्तो रहला ?
व्यवसायमा आज कुनै पनि नयाँ काममा समय खर्च नगर्नुहोस् । विचार गरेर मात्र धैर्यपूर्वक कार्य गर्नुहोला । आज समयको उचित प्रयोग गर्नुहोला । कर्मचारीहरुको हजुरमा पूर्ण समर्थन हुनेछ ।
प्रेममा सुखमय हुने देखिन्छ । श्रीमान-श्रीमती बीचको आपसी सद्भाव उपयुक्त रहनेछ । मित्रहरूसँग पारस्परिक भेटघाटको कारण मन प्रसन्न हुनेछ ।
ब्यापारमा नयाँ अर्डरबाट मनग्गे आम्दानी हुने देखिन्छ । सामाजिकसंचारमा दिन बदी मात्रामा बिताइएला । नकारात्मक झुकावका मानिससँग दूरी कायम राख्नुहोला, ठुलो बिपत्ति बाट बचिनेछ ।
तपाईसँग महत्त्वपूर्ण चीजहरू वा कागजातहरू हराउने प्रबल सम्भावना छ, सावधान रहनुहोला । कसैसँग झगडामा समय बर्बाद नगर्नुहोस् साथै आत्म-चिन्तन र मंथनको लागि केहि समय खर्च गर्नुहोस् ।
परिवारमा आपसी सहयोग र सुखद वातावरण हुनेछ । भावनात्मक सम्बन्धहरू बढ्नेछ । शारीरिक र मानसिक थकानबाट छुटकारा पाउन योग र ध्यान गर्नुहोस् ।
हजुरलाई सुम्पेको जिम्मेवारीहरू प्रति इमान्दार रहनुहुन्छ । आय स्थिति सुस्त रहनेछ । धैर्य र प्रतिकूल परिस्थितिमा संयमित हुनुहोस् । कहिलेकाँही तपाईको संदिग्ध प्रकृतिले काम भइरहेकोमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ ।
जीवनसाथीको साथ पारिवारिक समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास सफल हुनेछ । पारिवारिक आनन्द शान्तिमय रहनेछ । बच्चाहरूले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न आफ्नो समर्थन दिनुपर्दछ जसले गर्दा उनीहरुको मनोबल बढ्नेछ ।
तपाई आफ्नो क्षमता र प्रतिभाको बलमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । धार्मिक काममा पनि रुचि राख्नुहुनेछ । केही राम्रा र भविष्यका शुभ योजनाहरूका लागि पनि खर्च पनि हुनेछ ।
स्वास्थ्यमा सामान्य खराबी आउन सक्छ, आहार शुद्ध राख्नुहोस् । आयुर्वेदका औषधी पनि प्रयोग गर्नुहोला । आज, व्यस्त तालिकाबाट टाढा सर्दै, केही नयाँ गतिविधिहरू र जानकारीपूर्ण चीजहरू सिक्न समय खर्च गर्न सकिन्छ ।
घरको वातावरण शान्तिमय र रमाइलो रहनेछ । गोप्यता राख्नुमा सचेत रहनुहोला केहि समस्या प्रकट हुन सक्छ । सहिमूल्य र फाइदा गुमाउने जस्तो अवस्था छ । तपाईको व्यवसायका योजनाहरू गोप्य राख्नुहोस् ।
स्वास्थ्यमा एलर्जीको सम्भावना हुन्छ जस्तै खोकी, मौसमको कारण पनि केहि समस्या हुन सक्छ । बिना कारण मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्नुहोस् । तपाईको स्वास्थ्य सुरक्षा राख्नु महत्वपूर्ण छ ।
केहि समयको लागि चलिरहेको कुनै चिन्ताको समाधान हुनेछ र तपाई आफ्नो तनाव कम गर्न र आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूमा ध्यान दिन सक्षम हुनुहुनेछ । नजिकको आफन्तबाट बहुमूल्य उपहार पनि पाउन सकिन्छ ।
साप्ताहिक राशिफल : माघ ९ देखि १५ गतेसम्म कस्तो रहला राशिअनुसार तपाईंको दिन ?
मेष यो हप्ता केहि नराम्रो समाचार पाउँदा क्लेश बढ्नेछ । भावनात्मक हिसाबले धेरै बलियो महसुस गर्नु पर्नेछ । गाह्रो अवस्थामा साथीलाई मदत गर्दा तपाईले दुखको छुटकारा पाउनुहुनेछ सम्बन्ध पनि बलियो हुनेछ । रो...
मेष व्यापार व्यवसायसम्बन्धी कागज आदि राम्ररी जाँच गर्नुहोस् पछि तनावमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । साझेदारी कार्यहरुमा खाताहरूको बारेमा पारदर्शिता राख्न निश्चित गर्नुहोस् । झमेला बाट बचिनेछ । वृष क...
मेष ब्यापारीबर्गलाई बिशेष राम्रो रहन सक्ला । धन प्राप्तिले मन खुशी हुन सक्ला । सुखको अनुभव रहनेछ । तपाईं आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग मनोरञ्जनको कार्यक्रममा साँझ खर्च गर्नुहुन्छ । वृष आज तपाईंसँग भ...
मेष आज आफ्नो अधिकांश समय द्रव्य प्राप्तिको कर्ममा खर्च गरिनेछ । परिवार र वित्त सम्बन्धित कार्यहरुमा पनि सफलता मिल्न सक्ला । सकारात्मक सोचले राम्रो परिणाम ल्याउन मद्दत मिल्नेछ । वृष ...
दैनिक राशिफल : कस्तो रहला राशिअनुसार आजको भाग्य ?
मेष तपाई केहि नराम्रो समाचार पाउँदा क्लेश बढ्नेछ । भावनात्मक हिसाबले धेरै बलियो महसुस गर्नु पर्नेछ । गाह्रो अवस्थामा साथीलाई मदत गर्दा तपाईले दुखको छुटकारा पाउनुहुनेछ सम्बन्ध पनि बलियो हुनेछ । वृ...